Fanambarana momba ny toe-javatra pesta - The World March
Home » About us » Fifandraisana ofisialy » Fanambarana momba ny toe-javatra maharary
Namerina ny antso ho an'ny "World ceasefire" nataon'ny World Secretary ny tenany, Antonio Guterres tamin'ny 23 martsa ny World March.
TAFITA ANKEHOZAN-TOKONY ho an'ny FIVORIANA SY NY FIAVIANA
TSY MISY TOKONY HIDITRA INDRINDRA
Ny World March for Peace and Nonviolence dia nanako ny fiantsoana "ady an-trano" natsangan'ny sekretera jeneralin'ny ONU, António Guterres, tamin'ny 23 martsa, nangataka ny hijanonan'ny fifandirana rehetra mba "hifantoka miaraka" amin'ny tena ady amin'ny fiainantsika. "
Ny Guterres àry dia nametraka ny olan'ny fahantrana teo afovoan'ilay adihevitra, olana iray izay mitovy amin'ny olombelona rehetra amin'izao fotoana izao: "Ny tontolontsika dia miatrika fahavalo iraisana: Covid-19".
Ny personalities toa ny Papa François sy ireo fikambanana toa ny International Peace Bureau, izay nangataka ny hampiasa vola amin'ny fahasalamana fa tsy amin'ny fitaovam-piadiana sy fandaniam-bola dia efa tafiditra amin'ity antso ity.
Toy izany koa, Rafael de la Rubia, mpandrindra ny martsa maneran-tany ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fahatsiarovan-tena, rehefa vita ny 2 martsa andro vitsivitsy lasa izay ary nanodikodinana ny planeta fanindroany izy nilaza fa "ny hoavin'ny zanak'olombelona Izy io dia mila fiaraha-miasa, mianatra hahavaha olana miaraka.
Te hanana fiainana mendrika ho an'ny tenany sy ny olon-tiany ny olona
Nohamafisinay fa ity no tadiavin'ny olona sy anontanian'ny olona any amin'ny firenena rehetra, na inona na inona toe-piainan'izy ireo, ny lokon'ny hoditra, ny zavatra inoany, foko na fiaviany. Te hanana fiainana mendrika ho an'ny tenany sy ny olon-tiany ny olona. Izay no tena atahorany lehibe. Mba hahazoana izany dia mila mifampiahy isika.
Ny olombelona dia mila mianatra hiara-hiasa sy hifanampy satria misy loharano ho an'ny rehetra raha toa ka mitantana azy ireo isika. Ny iray amin'ireo kapoakan'ny olombelona dia ny ady manimba ny fiaraha-miaina ary manakaiky ny ho avy amin'ireo taranaka vaovao "
Nanomboka tamin'ny volana martsa manambara ny fanohanantsika ny fiantsoana ny sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana ary manolotra ihany koa izahay handroso sy handroso amin'ny alàlan'ny fifandaminana ny Firenena Mikambana amin'ny alàlan'ny famoronana «Filan-kevitry ny filaminana sosialy» izay miambina ny fahasalaman'ny rehetra. olombelona amin'ny planeta.ç
Ity tolo-kevitra ity dia notanterahina tany amin'ny firenena 50 amin'ny lalana tamin'ny 2 martsa. Mino izahay fa misy maika maika hampijanonana ny ady eto amin'izao tontolo izao, mba hanambara fiatoana "maika sy eran-tany" ary hiatrika ny filana ara-pahasalamana sy sakafo ara-tsakafo voalohany amin'ny mponina rehetra eny amin'ny planeta.
Manatsara ny fahasalaman'ny tsirairay ny fanatsarana ny fahasalaman'ny tsirairay!
Sekretera jeneralin'ny ONU António Guterres “Noho izany, miantso fampitsaharana famonoana maika eo amin'ny lafiny rehetra eran'izao tontolo izao aho androany. Fotoana tokony hanakatonana «ady» amin'ny ady mitam-piadiana, fampiatoana azy ireo ary hifantohana amin'ny tena ady amin'ny fiainantsika. Ho an'ireo antoko tsy mifaditrovana dia hoy aho: Atsaharo ny fankahalana Aleo ny tsy fahatokisan-tena sy ny fankahalana. Mampangina ny fitaovam-piadiana; ajanony ny zavakanto; fitokonan'ny rivotra. Zava-dehibe tokoa ny ataon'izy ireo… Mba hanampiana hamorona rédors ho afaka fanampiana lehibe dia tonga. Hisokatra fotoana sarobidy ho an'ny diplaomaty. Mitondra fanantenana any amin'ireo toerana marefo indrindra amin'ny COVID-19. Aoka isika ho aingam-panahy amin'ny fiaraha-miasa sy ny fifanakalozan-kevitra izay mamolavola tsikelikely eo amin'ny antoko mpifaninana hamela fomba vaovao hiatrehana ny COVID-19. Nefa tsy izany ihany; mila bebe kokoa isika. Tokony hampitsahatra ny faharatsian'ny ady isika ary hiady amin'ilay aretina manimba ny tontolontsika. Ary izany dia manomboka amin'ny famaranana ny ady eny rehetra eny. Ankehitriny. Izany no ilain'ny fianakaviana maha-olombelona antsika, mihoatra noho ny taloha. »